I-China Ukhetho oluchanekileyo noluchanekileyo kunye nokusetyenziswa kweendawo ezi-5 kubenzi beigloves ezichasene nobushushu kunye nabathengisi | Joysun
Iiglavu ubushushu High ukumelana
Njengoko igama libonisa, yindawo ekhethekileyo yokhuseleko lokukhusela iiglavu ezisetyenziswa kwindawo ezinobushushu obuphezulu. Ubushushu obuphezulu obuxubileyo beekhemikhali ifayibha iiglavu zeminwe yesundu kunye nesalathiso seminwe yokunxiba enganyangekiyo, ungakhetha iigloves ezahlukeneyo ezinobushushu obuphezulu ngokukahluka kobushushu bomnxeba wesandla. Ngokubanzi, iiglavu ezinobushushu obuphezulu obuphezulu zisetyenziswa kubushushu obuphezulu, kwimitha yobushushu okanye kwindawo evulekileyo yelangatye. Ukuthintela ukwenzakala kwezandla, kufuneka sisebenzise iigloves ezichasene nobushushu obuphezulu ngokuchanekileyo kwaye silumkele iingozi zemizi-mveliso.
Iiglavu eziphezulu ezinganyangekiyo kwiqondo lobushushu zingahlulwa zibe zindidi ezine ngokwezinto ezahlukeneyo: iiglavu zeasbestos ezinobushushu obuphezulu ezinganyangekiyo, iicarbon fiber iiglavu ezinobushushu obuphezulu, iiglavu eziphezulu zearamid ezinobushushu obuphezulu kunye neglasi ifayibha iigloves. Ngokwentsebenzo yeiglavu eziphezulu ezinganyangekiyo kwiqondo lobushushu eliphezulu, inokwahlulwa-hlulwa ibe ziiglavu eziqhelekileyo ezinobushushu obuphezulu, idangatye eligcina iiglavu ezinqabileyo, iigloves ezinqabileyo ezinobushushu obuphezulu, iiglavu ezingenalo uthuli, iiglavu ezingenanto ezinothuli. iiglavu, kunye neiglavu ezichasene nokusika ubushushu obuphezulu. Iindidi ezahlukeneyo zegloves ezinobushushu obukwiqondo eliphezulu kufuneka zikhethwe kunye ngokusekwe kwimeko ethile kwaye zifuna uhlobo olunye olufanelekileyo, ukuze kudlalwe isiphumo sayo esihle, sokukhusela.
Ubushushu obugqwesileyo iiglavu ngoku zisetyenziswa ngokubanzi kwaye zisetyenziswa kumashishini amaninzi. Ibe yimveliso ebalulekileyo yomsebenzi wokukhusela abasebenzi kwindawo enobushushu obuphezulu, enokunciphisa ngokufanelekileyo ukubakho kweengozi zeshishini kunye nokukhusela ukhuseleko kunye nempilo yabasebenzi kunye nabahlobo. Ubushushu obugqwesileyo iiglavu zisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezinamaqondo obushushu aphezulu anje ngesamente, iiseramikhi, ialuminium, izityalo zamandla, iipetrokhemikhali kunye nokuwelda ngombane.
Ezi ndawo zintlanu zilandelayo zilungele iigloves ezinobushushu obuphezulu, ezinokukunceda ube nokuqonda okungcono.
Eyokuqala: ishishini le-elektroniki kunye neekhemikhali
Umzi mveliso we-elektroniki kunye neekhemikhali kufuneka ukhethe iigloves ezichasene nobushushu obuphezulu. La mashishini mabini aneempawu zawo. Ngokubanzi, iigloves ezinobushushu obuphezulu obuphezulu kufuneka ukuba zibe neepropathi ezichasayo. Ngaphandle koko, umbane ongashukumiyo ngokulula unokubangela umonakalo kwimveliso kwaye unokubangela nokudubula. Iiglavu zokulwa ne-anti-static kunye nobushushu obuphezulu ezingabandakanyiyo zihlala zenziwe ngezinto ze-aramid. Uluhlu lomphezulu lwenziwe nge-99% ye-aramid fiber kunye ne-1% yocingo oluqhubayo. Inezinto ezilungileyo zokulwa ne-static, kwaye igqwesile ekunxibeni ukonakala kunye nokumelana nobushushu obuphezulu.
Uhlobo lwesibini: igumbi elicocekileyo kunye nelabhoratri
Iindibano zocweyo ezingenaluthuli kunye neelebhu kufuneka zikhethe iigloves ezingenawo uthuli. Zombini ezi ndawo zifuna iigloves ngokucoceka okuphezulu kunye nokuguquguquka, ngenxa yoko iiglavu ezinobushushu obuphezulu aziluthuli. Umaleko umphezulu wenziwe ngeso lenyama okanye iaramid filament ifayibha, ke umaleko womhlaba ungathintela uthuli kunye neetshipsi, kwaye unokumelana namaqondo ayi-180 amaqondo obushushu aphezulu, amaqondo angama-300 okuba bhetyebhetye, kunye nokusebenza ngokugqwesileyo.
Uhlobo lwesithathu: isinyithi, ukulahla, abasebenzi phambi kweziko
Abasebenzi kwisinyithi, bephosa, kunye neefanitshala kufuneka bakhethe iiglavu ezingafakwanga nobushushu zealuminium. Ngenxa yokuba indawo yokusebenza yolu shishino ine-radiation ebushushu kakhulu, ukuya kuthi ga kwi-800-1000 degrees, kodwa ayifuni kunxibelelana ngokuthe ngqo nezinto ezinobushushu obuphezulu. Ke ngoko, unokukhetha iiglavu zealuminium kwiiglavu ezinobushushu obunganyangekiyo ezinokubonakalisa ngokufanelekileyo imitha yobushushu. Ingabonisa ngokufanelekileyo i-95% yemitha ye-thermal kwaye ngaxeshanye inokumelana nama-800 eedigri zobushushu obuphezulu bolwelo ngokukhawuleza. Umaleko umphezulu weiglavu ezinobushushu obunganyangekiyo awuyi konakaliswa kwaye utshiswe. Uluhlu lwangaphakathi lufutshane. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukungena kobushushu, kwaye inokunika umsebenzisi ixesha lokuzikhulula ezandleni zakhe ukunqanda ukutsha kweqondo lobushushu, elikhusela ngokufanelekileyo umsebenzisi.
Okwesine: imboni yeglasi
Umzi-mveliso weglasi kufuneka ukhethe i-300-500 degree aramid iqondo eliphezulu lokugcina iiglavu. Kule shishini, ukumelana nokushisa okuphezulu kweeglavu ezinobushushu obuphezulu kuncinci, kwaye ukuguquguquka kwayo kunye nokusebenza ngokuchasene nokusika kuphezulu kakhulu. Ke ngoko, kufanelekile ngakumbi ukusebenzisa iigloves zearamid ezinobushushu obuphezulu obunganyangekiyo. Iiglavu zeAramid ezinobushushu obuphezulu ezinganyangekiyo kuphela kukumelana neqondo lobushushu eliphezulu kunye nokusebenza okulwa nokusika, umphezulu uthambile, umaleko wangaphakathi ukhululekile, kunye nokuguquguquka kweiglavu kulungile.
Okwesihlanu: umzi mveliso we-photovoltaic
Umzi mveliso we-photovoltaic kufuneka ukhethe iigloves ezingama-500 zearamid ezinobushushu obuphezulu ezinganyangekiyo okanye iigloves ezingama-650 ezinesidanga esidibeneyo. Umzi mveliso uneemfuno eziphezulu kakhulu zokunxiba ukuxhathisa kunye nokusebenza okuzinzileyo kokusebenza kweeglavu ezinobushushu obunganyangekiyo, kwaye iqondo lobushushu lokudibana ngokubanzi malunga ne-500-650 degrees. Ukukhethwa kweiglavu eziphezulu zearamid ezinobushushu obuphezulu kuxhomekeke kukumelana nokushisa okuphezulu kunye nokunxiba ukumelana. Umaleko wobushushu obungqingqwa wobushushu, umaleko womhlaba kunye nokwaleka kokunxiba kunokubonyusa kakhulu ubomi bokusetyenziswa okungapheliyo kwaye banokusebenza ngokuqhubekayo. Iiglavu ezikwiqondo lobushushu eliphezulu zeAramid ikwasetyenziswa kakhulu kwiigloves zokukhusela ubushushu obuphezulu kumzi mveliso we-photovoltaic, kwaye uzinzo lwawo luqinisekisiwe emva kokusetyenziswa kakhulu.
Ezi zingasentla zezi ndawo zintlanu zisebenza kwiigloves ezichasene nobushushu obuphezulu, kwaye iintlobo zegloves ezinokumelana nobushushu obuphezulu ezisebenzayo kumzi mveliso ngamnye zaziswa ngokweenkcukacha. Kuphela kukhetho oluchanekileyo lweiglavu ezinobushushu obuphezulu, kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo okunokudlala ifuthe elifanelekileyo lokhuselo. Ukukhethwa okukhethekileyo kweiglavu ezinobushushu obuphezulu obufunekayo kufuneka kuthathelwe ingqalelo iqondo lobushushu kunye nexesha lokudibana nezinto ezinobushushu obuphezulu, ke iiglavu ezikhethiweyo zobushushu obuphezulu ezikhethiweyo kufanelekile.
Ixesha Post: Jul-06-2020